ဇာတိမြေ (သန်.ဇင်မင်း): August 2015
Posted by Thant Zin Minn at 1:09 AM
ဒီစာအုပ် ဒီပုံပြင်ကို ဖတ်ဖူး၊ ကြားဖူးသူတွေ ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။ ဆင်းရဲတဲ့ လူတွေ“ဘာ” အလိုအပ်ဆုံးလဲ “ငွေကြေး”ဟု လူတိုင်း ဖြေမည်မှာ ဧကန်မလွဲပေ။ သို့သော်.. ကျွန်မ ဖတ်ဖူးသော ပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ်ကို ဘာသာပြန် မျှဝေ လိုက်ပါသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် Balaang ဟုခေါ်သော လူတစ်ဦးသည် ပုံတူ ပန်းချီကားများ ရောင်းဝယ်ခြင်းဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခဲ့သည်။ အချိန်(၁၀)နှစ် မတိုင်မီ ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင် လူ(၅၀)တွင် တစ်ဦး အပါအ၀င်ဖြစ်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၈)ခုနှစ်တွင် ကင်ဆာရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး မကွယ်လွန်မီ မိမိ၏ ခန္စာကိုယ်အား ဆေးရုံတွင် လှူဒါန်းခဲ့သည့် အပြင် ပြင်သစ်ငွေ ၁၀၀ မီလီယံကို ဆင်းရဲခြင်းဟုသော လျှို့ဝှက်တံခါးကို ဖွင့်နိုင်သူအား ဆုငွေအဖြင့် ပေးရန် ချန်ထားရစ်ခဲ့သည်။
သူကွယ်လွန်ပြီး မကြာမီ ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ သတင်းစာ တစ်စောင်တွင် သူရေးခဲ့သော သေတမ်းစာကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ သူ၏ သေတမ်းစာမှား
“ကျွန်တော်ဟာ အရင်က ဆင်းရဲတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ ကွယ်လွန်တော့ သူဌေးဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ ကောင်းကင်ဘုံကို သွားရမယ့်လူပါ။ ကောင်းကင်ဘုံကို မ၀င်ခင် ကျွန်တော် ဘာကြောင့် သူဌေးဖြစ်ရတယ် ဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ကျွန်တော် သယ်မသွားချင်ပါဘူး။ အဲဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကို ပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်က ကျွန်တော်ရဲ့ မီးခံ သေတ္တာထဲမှာ သိမ်းဆည်း ထားပါတယ်။ အဲဒီ သေတ္တာရဲ့ သော့သုံးချောင်းကို ကျွန်တော်ရှေ့နေနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးဆီမှာ အပ်နှံထားခဲ့တယ်။ ဆင်းရဲသားတွေ ဘာလိုအပ်လို့ ဆင်းရဲရတာလဲ ဆိုတဲ့ အမေးကို ဖြေဆိုနိုင်သူကို ကျွန်တော် ကောင်းချီး ပေးချင်ပါတယ်။ ဖြေဆိုနိုင်တဲ့သူကို ကျွန်တော် အခေါင်းထဲကနေ ထပြီး လက်ခုပ်တီး ကောင်းချီး မပေးနိုင်ဘူး ဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ မီးခံသေတ္တာထဲက ၁၀၀ မီလီယံကို ယူသွားခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ ကောင်းချီးသြဘာပါပဲ။”
သေတမ်းစာကို ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးနောက် သတင်းစာတိုက်သို့ စာများ အဆက်မပြတ် ရောက်လာခဲ့သည်။ ဆင်းရဲသားများ ဘာ အလိုအပ်ဆုံးလဲ ဟုသော မေးခွန်းကို ဖြေဆိ်ုသော အဖြေ စုစုပေါင်း (၄၈၅၆၁)ကို လက်ခံ ရရှိခဲ့သည်။ လူအများစုက ဆင်းရဲသားများ အလိုအပ်ဆုံးမှာ “ငွေကြေး”သို့မဟုတ် “ကြီးပွား တိုးတက်အောင် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ လုပ်နိုင်ခွင့် နည်းလို့” ဟု ဖြေဆိုထားကြသည့် အပြင် တချို့က “အကူအညီ မဲ့လို့” ဆင်းရဲနေကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဖြေထားကြသည်။
သူကွယ်လွန်သော နှစ်ပတ်လည် နေ့တွင် မီးခံသေတ္တာကို သက်သေများရှေ့၌ ဖွင့်ခဲ့သည်။ စာပေါင်း (၄၈၅၆၁) စောင်ရှိသည့်အနက် Tiller မည်သော ကလေးမလေး၏ အဖြေမှာ သူ၏ လျှို့ဝှက်ချက်နှင့် ကိုက်ညီခဲ့သည်။ ထိုအဖြေမှာ “ဆင်းရဲသားများ ဆင်းရဲနေခြင်းမှာ ရည်မှန်းတောင့်တချက်၊ ချမ်းသာလိုသော အာသီသ (ambition) ကင်းမဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်”။
၉နှစ်သာရှိသေးသော Tiller အား ဘာကြောင့် စိတ်ဆန္ဒ အာသီသဟု ဖြေဆိုခဲ့ပြီး တစ်ခြားအဖြေကို မဖြေခဲ့ရသလဲ ဟုမေးသော် သူမက “၁၁နှစ်အရွယ် ကျွန်မအစ်မဟာ သူ့ချစ်သူကို အိမ်ခေါ်ပြန်လာတိုင်း စိတ်ဆန္ဒ မရှိနဲ့လို့ အမြဲသတိ ပေးတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ဆန္ဒ ဆိုတာ ကိုယ်လိုချင်၊ ဖြစ်ချင်တဲ့ အရာကိုရအောင် လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ ထင်ခဲ့တာပါ” ဟုပြန်ဖြေခဲ့သည်။
သူဌေး၏ လျှို့ဝှက်ချက်သည် ပြင်သစ်၊ အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်စသော နိုင်ငံကြီးများကို တုန်လှုပ်စေခဲ့သည်။ နောင်တွင် မင်းသား၊ မင်းသမီးများနှင့် စီးပွားရေးလောကတွင် ထိပ်တန်း ရောက်နေသူများကို ထိုလျှို့ဝှက်ချက် နှင့် ပတ်သက်ပြီး အင်တာဗျူး ကြရာတွင် စိတ်ဆန္ဒသည် ထာဝစဉ် တည်မြဲစေသော ဆေးတစ်ပါးဖြစ်၏။ ထူးခြား အောင်မြင်သော အရာဝတ္ထုတိုင်း၏ မျိုးစေ့ဖြစ်သည် ဟုဖြေဆိုခဲ့ကြသည်။
လူအများ ဆင်းရဲနေရခြင်းမှာ သူတို့တွင် တူညီသော အားနည်းချက် တစ်ခုရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုအားနည်းချက်မှာ တကယ့်ချမ်းသာလိုသော စိတ်ဆန္ဒ ကင်းမဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ချမ်းသာသော သူများ၏ အိတ်ကပ်ထဲတွင် ဆင်းရဲသော သူများ၏ အိပ်မက်ကို အမြဲထည့်ထား တတ်ကြပါသလား.... သင်၏ မျှော်လင့်ချက်၊ သင်၏အိပ်မက်နှင့် ကြိုးစားလိုစိတ်ကို သင့်ထွေးပွေ့ ထားလျှင် လမ်းဆုံးကို မရောက်မချင်း သင်သည် ဆင်းရဲသောသူ မဖြစ်နိုင်...
အဲဒီပုံပြင်ကို ဖတ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ တွေးမိတာလေးတွေပါ။ ကြီးပွားလိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒ၊ ချမ်းသာလိုတဲ့ အာသီသ ဘယ်သူမရှိလဲ ဆိုတဲ့ ကပ်သပ်တဲ့ မေးခွန်းကို ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် မေးကြည့်မိတယ်။ လူတိုင်း သူဌေးဖြစ်ချင်ကြ တာပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့နေရာတွေမှာ မိမိလိုချင်တဲ့ ဆန္ဒကို အရောင်အမျိုးမျိုး ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ တစ်ချို့အရာတွေဟာ စိတ်ဆန္ဒ မဟုတ်တော့ဘဲ လိုချင်တပ်မက်တဲ့ အတ္တဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ ပုံပြင်ထဲက သူဌေးကြီးပြောချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒဆိုတာ နေရာ တစ်နေရာ ရချင်လို့၊ တစ်ခုခုရယူချင်လို့ အာဏနဲ့ သိမ်းပိုက် လိုက်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အမြင့်ကို တစ်ဆင့်ချင်း တစ်လှမ်းချင်း တဖြေးဖြေး ပြောင်းလဲ တိုးတက်သွားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်မက်တွေ သာဖြစ်တယ်။
ဆန္ဒနဲ့အိပ်မက် လူတိုင်းမှာ ရှိခဲ့ဖူးကြပါတယ်။ ကလေးလေး တစ်ယောက်ကို ကြီးလာရင် ဘာလုပ်မလဲလို့ သွားမေးကြည့်.. ၉၀%က ကြီးလာရင် ဆရာဝန်လုပ်မယ်၊ အင်ဂျင်နီယာ လုပ်မယ်လို့ ဖြေကြမှာပါပဲ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကိုယ်လဲ အဲဒီကလေးလို ဖြေကောင်း ဖြေခဲ့ဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်ရဲ့ တိုက်စားခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီးနောက် ကျရှုံးလိုက်၊ အဟန်အတားတွေနဲ့ မကြာခဏ ရင်ဆိုင်လာရတော့ ၀မ်းပိုက်ပြည့်ရင် ပြီးတာပဲလေ ဆိုတဲ့ ရောင့်ရဲမှုကို လက်ခံတတ်လာခဲ့တယ်။ အရင်က ဖြေခဲ့ဖူးတဲ့ မိမိ၏ ရည်မှန်းချက်၊ မိမိ၏ အိပ်မက်ဆိုတာကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ မေ့လျော့လာခဲ့တယ်။
“နပ်မှန်အောင် စားနေရရင် ပြီးတာပဲ” ....“တနေ့ရှာမှ တနေ့စားရတာ” “အသက်ကြီးလာပြီ ဘာများ မက်နေစရာလိုတော့လဲ” ..“သေရင်လဲပါမသွားဘူး။ ဒီလောက် ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်နေစရာမလိုဘူး” စတဲ့ စတဲ့ အသံကို ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေ့တိုင်း ကြားနေရတယ်။ ဗုဒ္စဘာသာ ပီပီ ရှိတာလေးနဲ့ လှအောင်ဝတ်၊ ရှိတာလေးနဲ့ ၀အောင်စားဆိုတဲ့ ရောင့်ရဲ တင်းတိမ်ခြင်းကို လက်ဝယ် ပိုက်လာခဲ့မိတယ်။ တကယ့်အောင်မြင်ချင်တဲ့ လူတွေကတော့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ အိပ်မက်ကို ထွေးပွေ့လို့ တစ်လှမ်းချင်း ရှေ့ဆက်လှမ်းနေကြတယ်။
“ကျွန်တော်ဟာ အရင်က ဆင်းရဲတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်ဘာကြောင့် သူဌေးဖြစ်ရတယ် ဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ကျွန်တော် သယ်မသွားချင်ပါဘူး။”
အဲဒီ သယ်မသွားချင်ဘူးဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ “စိတ်ဆန္ဒ” ဟာ အိပ်မောကျနေတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်မက်နဲ့ စိတ်ဆန္ဒကို ထပ်တဖန် လှုပ်နိူး နိုင်စွမ်း ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်..........
Posted by Thant Zin Minn at 1:07 AM
အမေရိကရှိ ကျောင်းတစ်ကျောင်း၏ စာသင်ခန်းတစ်ခုတွင် ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာက ကျောင်းသားများကို "ကျွန်တော်၏ရည်မှန်းချက်" ခေါင်းစင်ဖြင့် စာစီစာကုံးတစ်ပုဒ် ရေးခိုင်းခဲ့သည်။
ကျောင်းသားတစ်ဦးက ဆရာပေးသည့် ခေါင်းစဉ်ကို အနှစ်ခြိုက်ကြီး နှစ်ခြိုက်ပြီး ဗလာစာအုပ်ပေါ်တွင် သူ့ရည်မှန်းချက်ကို ချက်ချင်းချရေးခဲ့သည်။ သူ၏ ရည်မှန်းချက်မှာ "ကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ မြေကွက်ကြီးတစ်ကွက်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဲဒီမြေကွက်ပေါ်မှာ သစ်ပင်၊ ပန်းမာလ်တွေ အပြည့်စိုက်ပြီး စိမ်းစိုတဲ့ဥယျာဉ်လုပ်ပါမယ်။ ပြီးတော့ ပန်းခြံအလယ်မှာ သစ်သားအိမ်လေးတွေ ဆောက်ပြီး အသားကင်ဖို့ နေရာတွေ ထားရှိပါမယ်။ ဟိုတယ်တစ်လုံးကိုလည်း ဆောက်ပြီး ကိုယ့်မိသားစုအပြင် အခြား လာရောက်လည်ပတ်သူတွေကိုလည်း အနားယူအပန်းဖြေစေပါမယ်" ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် သူ၏စာစီစာကုံးကို ဆရာအားပြရာ ဆရာကတစ်ချက်ကြည့်ပြီး မင်နီဖြင့်"X" ကြက်ခြေခတ်လိုက်သည်။ ဆရာက သူ့အား နောက်စာစီစာကုံးတစ်ပုဒ်ကို ရေးခိုင်းစေခဲ့ပြန်သည်။
ကျောင်းသားက သူရေးထားသည့် စာစီစာကုံးကို သေချာပြန်ဖတ်ပြီး အမှားမတွေ့သောကြောင့် ဆရာအား ထပ်ပြလေသည်။
ဆရာက "မင်းကို မင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်စိတ်ကူးကို ရေးခိုင်းတာ၊ ဒီလို အိပ်မက်ဆန်ဆန် စိတ်ကူးယဉ်တာကို ရေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ မင်းရဲ့ တကယ့်ရည်မှန်းချက်ကို ဆရာလိုချင်တယ်။ မဖြစ်နိုင်တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်တွေကို ဆရာမလိုချင်ဘူး။ နားလည်လား?" ဟူပြောသောအခါ ကျောင်းသားက "ဆရာ... ဒါ ကျွန်တော်ရဲ့ တကယ့်ရည်မှန်းချက်ပါ" ဟူ အားတက်သရော ပြန်ဖြေသည်။
"မဟုတ်ဘူး.. ဒါဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါတွေက စိတ်ကူးယဉ်တာတွေပဲ .... မင်းအသစ်ပြန်ရေးပါ"
"ကျွန်တော် နားလည်တယ်ဆရာ.. ဒါ ကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပါ။ ကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ကို ကျွန်တော်မပြင်နိုင်ဘူး ဆရာ"
ဆရာ့စကားကို ပြတ်ပြတ်သားသား ငြင်းဆန်ပြီး ကျောင်းသားကပြန်ပြောသည်။
"တကယ်လို့ မင်းအသစ်မရေးရင် မင်းကိုဆရာ အောင်မှတ်မပေးဘူး။ မင်း သေချာစဉ်းစားပါ"
ခေါင်းခါပြီးပြောသော ဆရာ့စကားကို ကျောင်းသားကလည်း ထပ်မရေးနိုင်ကြောင်း ခေါင်းခါပြသည်။ နောက်ဆုံး ထိုစာစီစာကုံးမှာ " E " အဆင့်သာရခဲ့သည်။
ထိုသို့သော အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပျက်ပြီး နှစ်ပေါင်း(၃ဝ)အကြာတွင် ၎င်းဆရာက ကျောင်းသားတစ်သိုက်နှင့် အပန်းဖြေပန်းခြံတစ်ခုသို့ ပျော်ပွဲစားရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဆရာက မြက်ခင်းစိမ်းနှင့် ပန်းပေါင်းစုံကို ငေးမောကြည့်ရှုရင်း သင်းပျံ့သော အသားကင်နံ့ကို ရှူရှိူက်နေမိသည်။ တစ်နေရာတွင် လူလတ်ပိုင်း လူရွယ်တစ်ဦးက ဆရာဆီဦးတည်လျှောက်လာပြီး သူ့ကိုယ်သူ ဆရာ၏တပည့်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်ဟု ပြောဆို မိတ်ဆက်လေသည်။
လူရွယ်က ဆရာကို အကြောင်းစုံပြောပြပြီး သူသည် ထိုနှစ်က စာစီစာကုံးမအောင်သော ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ပြောသည်။ သို့သော် ယနေ့တွင် သူသည် စာစီစာကုံးထဲက ရေးခဲ့သည့်အတိုင်း သူ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် အပန်းဖြေဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုကို တည်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ဆရာမှာ လူငယ်စကားကြောင့် လွန်ခဲ့သော အနှစ်(၃ဝ)ကို ပြန်မြင်ယောင်မိသည်။ မိမိရှေ့တွင်ရပ်နေသော လူရွယ်ကိုကြည့်ပြီး စကားတစ်ခွန်းကို ရေရွတ်လိုက်တော့သည်။
"အနှစ်(၃ဝ)အတွင်းမှာ ငါ့အတွက်နဲ့ ကျောင်းသားဘယ်နှစ်ယောက်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်အိပ်မက်တွေကို ငါချေဖျက်ခဲ့မိသလဲ မသိဘူး? မင်းကတော့ မင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ကို ငါ့ကြောင့်အချေဖျက်မခံဘဲ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခဲ့တဲ့ တစ်ဦးတည်းသောကျောင်းသားဖြစ်တယ်"
သင်ရော? သင့်ရည်မှန်းချက်အိပ်မက်တွေ သူတစ်ပါး၏ ပါးစပ်ဖျားကြောင့် ပျောက်ဆုံးကုန်ခဲ့ရပြီလား? အခိုးခံခဲ့ရပြီလား?
Posted by Thant Zin Minn at 1:04 AM
(1) ကျွန်တော်တို့ အားလုံး နှာချေ တဲ့အခါမှာ မျက်လုံးဖွင့်ပြီး ဘယ်လိုမှ
(2) လင်းပိုင်တွေဟာ အိပ်တဲ့အခါမှာ မျက်လုံးတစ်ဖက်ဖွင့်ပြီး အိပ်ကျပါတယ်
(3) နှစ်စဉ်တိုင်း နှစ်စဉ်တိုင်းမှာ မြွေကိုက်ခံရလို့ သေဆုံးတဲ့ လူအရေအတွက်ထက်
ပျားတုပ်ခံရလို့ သေဆုံးတဲ့ လူအရေအတွက်က ပိုများပါတယ်
(4) ညာသန်လူတွေဟာ ဘယ်သန်လူတွေထက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ကိုးနှစ် ပိုအသက်ရှည်ကြပါတယ်
(5) ကျွန်တော်တို့အားလုံး Queen Elizabeth I ကို မသိရင်တောင်
လိုအပ်သည် ဖြစ်စေ မလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ သုံးလမှာ တစ်ကြိမ်သာ ရေချိုးပါတယ်တယ်။
(6) နာဇီခေါင်းဆောင်ဟစ်တလာဟာ သက်သတ်လွတ်စားသူဖြစ်ပြီး သူ့မှာ Testis (ဝှေးစေ့)
(7) ပိုလာ ၀က်ဝံတွေဟာ ပင်ဂွင်းငှက် 86 ကောင်ကို တစ်ထိုင်တည်း စားနိုင်ပါတယ်
(8) ဂေါက်သီးတစ်လုံးရဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ အစက်အပြောက်( အချိုင့်)ပေါင်း
(9) သင် နှာချေတဲ့အခါမှာ ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းအား ပိတ်ဆို့မှု မဖြစ်စေရန်
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင့်မျက်လုံးများ ကွဲထွက်သွားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်
(10) ပိုးဟပ်တစ်ကောင်အား ခေါင်းဖြတ်လိုက်မည်ဆိုပါက ဆယ့်ငါးရက်တိုင် ဆက်လက်
အသက်ရှင်နေနိုင်ပါသည်၊၊ ထိုသို့သေဆုံးသွားခြင်းမှာလည်း ဆယ့်ငါးရက်တိုင်
(11) ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူတွေအားလုံး ဘေးချင်းယှဉ်ပြီးတန်းစီလိုက်ရင်
ကမ္ဘာကို အပတ် 60
(12) လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အသန်မာဆုံးသော ကြွက်သားကတော့ လျှာ ဖြစ်ပါတယ်
(13) ရေဘ၀ဲ တွေမှာ နှလုံးသား သုံးခု ပါရှိပါတယ်
(14) နေ ကနေ ကမ္ဘာကို အလင်းတန်းကျရောက်ရန်အချိန် 8 မိနစ် လိုအပ်ပါတယ်
အဲဒါဟာ ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတော့ သင်ဟာ နေ၀င်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့
ဲ့ အချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့ 8 မိနစ်ကတည်းက နေ၀င်ပြီးသွားပါပြီ
(15) လူတွေစားသုံးနေကြတဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာ တစ်ခုထဲသောမပုပ်မသိုးနိုင်တဲ့ အစားအစာ
(16) အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေထဲမှာ သရ(vowels)မပါဘဲ အရှည်ဆုံးသော စကားလုံးမှာ
twyndylly ngs ဖြစ်ပြီး အမွှာစုံတွဲများ လို့အဓိပွါယ်ရပါတယ်
(17) ၀က်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရ ကောင်းကင်ကို
(18) မေလ မှာမွေးတဲ့ကလေးတွေဟာ အခြားလမှာမွေးတဲ့ ကလေးတွေထက် ပျမ်းမျှအားဖြင့်
200 grams ပိုလေးပါတယ်
(19) အက်စ်ကီးမိုး လူမျိုးတွေမှာ ဆီးနှင်း(snow)လို့အဓိပွါယ်ရတဲ့
ရှိပြီး (hello)ဟလို ဟူသောနှုတ်ခွန်းဆက်စကားလုံး မရှိပေ၊၊
(20) ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောလူဦးရေကို အယောက်တစ်ရာထိ အချိုးကျစွာ ချုံ့လိုက်မည်ဆိုပါက
အာရှတိုက်မှ 57 ယောက်၊ ဥရောပတိုက်မှ 21 ယောက်၊ အမေရိကတိုက်မှ 14 ယောက် နှင့်
အာဖရိကတိုက်မှ 8 ယောက် စီရှိမှာဖြစ်ပါတယ်၊၊ထိုအထဲမှ တစ်ယောက်တည်းကသာလျှင်
(21) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်လုံးအရွယ်အစားဟာ မွေးသည်မှ သေသည်ထိ တရွယ်တည်း
ဖြစ်ပြီး ၊ နှာခေါင်းနှင့် နားရွက်မှာမူ ကြီးထွားမှုနုန်း ရပ်တန့်သွားခြင်းမရှိပေ
(22) အကယ်၍သင်သည် မိုးကြိုးပစ်ခံရပါက အပူချိန် 28000 ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်
ခံရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုအပူချိန်မှာ နေမျက်နှာပြင်ထက်ပိုမိုသော အပူချိန်ဖြစ်သည်
(23) ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ငှက်များအားလုံးထဲမှ အပြာရောင်ကို
(24) ပုံမှန်အားဖြင့် တနေ့တာအတောအတွင်း အမျိုးသားများသည် စကားလုံး 2000 ကျော်
ပြောပြီးချိန်တွင် အမျိုးသမီးများမှာ စကားလုံးပေါင်း 7000 ကျော်ပြောပြီးဖြစ်ပေသည်၊၊
(သြော်... မိန်းမ မိန်းမ )
(25) ပျားကောင်များသည် ပျားရည် တစ်ပေါင် ရရှိရန် ပန်းပွင့်ပေါင်း 2000
နားရောက်ရပြီး ခရီးမိုင်ပေါင်း 55000 ကျော် ပျံသန်းရပေသည်၊၊
(26) ခုန်ပေါက်ခြင်း(jumping) မပြုလုပ်နိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော နို့တိုက်သတ္တ၀ါကတော့
(27) ဂေါက်ရိုက်ကစားခြင်းကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက စကော့တလန်ပြည်မှ စတင်
တီထွင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်၊၊သူတို့ဟာ အဲ့ဒီ ကစားနည်းကို " Gentlemen Only
Ladies Forbidden " လို့ သတ်မှတ်ထားရာကနေ အင်္ဂလိပ်တွေက GOLF ဆိုပြီး စတင်
ကစားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်၊၊also call Game Of Lazy Fallows
(28) ခြဘုရင်မတစ်ကောင်ဟာ နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်တိုင်အသက်ရှင်နေနိုင်ပြီး
(29) သင်နှင့်အတူ မွေးနေ့တစ်နေ့တည်း ကျရောက်နေသူပေါင်းမှာ 10,000,000 (ဆယ်သန်း)
(30) ပိုးဟပ်များ လုံးဝမစားသော တစ်ခုတည်းသောအစားအစာမှာ သခွားသီး ဖြစ်ပါတယ်
Posted by Thant Zin Minn at 12:59 AM
ယခုကဲ့သို့သော မိုးရာသီတွင် မိုးတစ်ပြိုက်နှစ်ပြိုက်ခန့် ရွာချပြီးပါက လမ်းမထက်တွင် ရေများအိုင်ထွန်းကာ ကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်။ ဆင်ခြေဖုံး ဒေသများတွင်လည်း ရွှံ့ဗွက်အိုင်များ ရေဆိုးအိုင်များဖြင့် လွှမ်းခြုံသွားတတ်သည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ လမ်းမထက်တွင် တင်ကျန်ရစ်သည့် ရေများနှင့် ရေဆိုးအိုင်များမှ ရေဆိုးရေညစ်များသည် လူတို့၏ အရေပြားအား ကောင်းစွာဒုက္ခပေးနိုင်သည့် အရေပြားဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို သယ်ဆောင်လာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် ရာသီဥတု ပူပြင်းရာမှ ရုတ်တရက် မိုးရွာချတတ်သည့် ယခုကဲသို့ မိုးတွင်းရာသီတွင် ရာသီဥတုပူပြင်းသဖြင့် ထွက်လာသည့် ချွေးများနှင့် မိုးရွာသဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင် စိုစွတ်လာသည့် မိုးရေများက ခန္ဓာကိုယ် အပေါ်ယံအရေပြားအား နှူးသကဲ့သို့ဖြစ်ကာ အရေပြားတွင် မှိုစွဲနိုင်သည့် အခွင့်အရေး ပိုများလာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုကဲ့သို့သော မိုးရာသီတွင် အဓိကအားဖြင့် မှိုကြောင့်ဖြစ်ပွားတတ်သည့် အရေပြား ရောဂါများဖြစ်သော ပွေး၊ ၀ဲ၊ ညှင်း၊ နှင်းခူ အစရှိသည့် အရေပြား မှိုစွဲရောဂါများ ဖြစ်လေ့ရှိကြကြောင်း အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန် က ပြောသည်။ ထိုအထဲတွင် အချို့သော အရေးပြား မှိုစွဲနာများဖြစ်သည့် နှင်းခူ၊ ဝဲစသည့် အရေပြား မှိုစွဲနာများသည် ရာသီမရွေး ဖြစ်ပွားတတ်သော်လည်း မိုးရာသီတွင် ပိုမိုဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ များပြားကြောင်း သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့သော မိုးရာသီတွင် ဝဲ၊ နှင်းခူစသည်တို့ ဖြစ်ပွားပါက ယခင်ရောဂါအခံ ရှိသူများသည် ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးသည်များပါ ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အခြေအနေရှိကြောင်း သိရသည်။ သို့သော် ယခုကဲ့သို့သော အချိန်တွင် ၀ဲရောဂါ ဖြစ်ပွားပါကလည်း ၀ဲအစိုဖြစ်ပွားနိုင်ပြီး၊ နှင်းခူဖြစ်ပွားပါကလည်း နှင်းခူအစို ဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ မိုးရာသီတွင် အရေပြား မှိုစွဲခံရတတ်သူများသည် ရောဂါအခံရှိသူများ (ဥပမာ-ဆီးချိုရောဂါ ရှိသူများ) ခုခံအားကျဆင်းနေသူများ ဖြစ်ပွားနိုင်ပြီး တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး အားနည်းသူများလည်း မှိုရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိကြောင်း သိရသည်။ အလားတူမိုးရာသီတွင် ဖြစ်တတ်သည့် မှိုရောဂါနောက်တစ်မျိုးမှာ ခြေချောင်းများနှင့် လက်ချောင်းများအတွင်းတွင် ခိုအောင်းနေတတ်သည့် ရေများကြောင့် အရေပြားနူးအိပြီး ခြေချောင်း၊ လက်ချောင်းများကြားတွင် အဖြူရောင်အဖတ်များသဖွယ် စွဲကပ်နေတတ်သည့် မှိုရောဂါတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပွားနိုင်သေးကြောင်း သိရသည်။ “မှိုက မစိုမခြောက် အခြေအနေကို သဘောကျတယ်။ မိုးတွင်းကျတော့ မိုးရွာတဲ့အချိန်မှာ မိုးရေစိုမယ်၊ မရွာတဲ့အချိန်တွေကျတော့ ချွေးတွေနဲ့ဆိုတော့ အရေပြားကို နှူးသလိုဖြစ်ပြီး ဒီလို မိုးတွင်းအချိန်မှာ အဖြစ်များတတ်ပါတယ်”ဟု ဆိုသည်။
အလားတူ မိုးရာသီတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သည့် တုပ်ကွေးရောဂါ ဗိုင်းရပ်စ်များကြောင့် အရေပြားတွင်လည်း အနီကွက်များ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အနီကွက်များအား သေချာခွဲခြား သိနိုင်ရန်အတွက် တတ်ကျွမ်းနားလည်သည့် ဆရာဝန်နှင့် ပြသရန် လိုအပ်သည်ဟု သိရသည်။ မိုးရာသီတွင် အရေပြား မှိုစွဲခံရခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် အဝတ်အစားများအား ခြောက်သွေ့စေရန်၊ သေချာစွာလျော်ဖွတ် ၀တ်ဆင်ကြရန် လိုအပ်ပြီး တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးကိုလည်း အထူးဂရုစိုက်ရန် လိုအပ်သည်။ အဆောင်နေသူများ၊ မိုးထဲရေထဲတွင် အလုပ်လုပ်ရသူများသည် အရေပြားမှိုစွဲခံရရန် အခွင့်အရေး များပြားသဖြင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို အထူးဂရုစိုက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။ အကယ်၍ အရေပြားမှိုစွဲခံရပါကလည်း စွဲကပ်ခံရသည့် မှိုအပေါ်မူတည်၍ သောက်ဆေးလိမ်းဆေးများအား မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့် စနစ်တကျ သောက်လိမ်းကြရန် လိုအပ်သည်။
ထိုသို့ဆေးလိမ်း ဆေးသောက်ကြရာတွင်လည်း မှိုသတ်ဆေး သီးသန့်သာပါသည့် ဆေးများ လိမ်းရ၊ သောက်ရသည့် မှိုနှင့် စတီးရွိုက်ပါသည့် ဆေးများ လိမ်းရ၊ သောက်ရသည့် မှိုအမျိုးအစားများ ကွဲပြားသည့်အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။ “မှိုစွဲပြီဆိုရင်တော့ မှိုသတ်ဆေး သီးသန့်ပါတာကိုပဲ သီးသန့်လိမ်းရတဲ့ဟာရှိတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း စတီရွိုက်ပါတာ လိမ်းရတာတွေရှိတယ်။ ဥပမာ-နှင်းခူလိုဟာမျိုး ဆိုရင်တော့ စတီးရွုိက်ပါတာ လိမ်းရတယ်”ဟု ဒါက်တာလင်းထက်ကပြောသည်။ အခြားမှိုများဆိုလျင်လည်း Clotrimazole, Miconazole အစရှိသည့် မှိုသတ်ဆေး သီးသန့်သာပါသည့် ဆေးများလိမ်းရန်သာ လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။ သို့သော် အရေပြားမှိုစွဲခြင်းသည် ဖြစ်ပွားမှကုသခြင်းထက် မဖြစ်ခင်ကပင် ကြိုတင် ကာကွယ်ထားကြရန် လိုသည့်အတွက် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို အထူးဂရုပြု ထိန်းသိမ်းကြရန်လိုအပ်သည်ဟု အရေပြား ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက ဆိုသည်။
(7Day News Journal)
Posted by Thant Zin Minn at 10:22 PM
ဘလော့ဂ်ဂါ မိတ်ဆွေတဦးမှ သူခံစားရတာလေး သက်သာအောင် ဘယ်လိုနေရမလဲ မေးလာ တာနဲ့ အားလုံးလည်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတလေး ရရှိစေရန် ဒီပို့စ်လေးကို ရေး သားလိုက်ပါတယ်။
ထိပ်ကပ်(ခပ်)နာ ဆိုတာ လူ့ဦးခေါင်းခွံရိုး အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ လေအိတ်ငယ် လေးများ ယောင် ယမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လူ့ရဲ့ဦးခေါင်းခွံရိုး အတွင်း မျက်ခုံးရိုးတ၀ိုက်၊ ပါးနှင့် မေးရိုးတ၀ိုက် နှင့် နှာခေါင်းရိုးတ၀ိုက်တွင် အခေါင်းပေါက် ပါသော လေအိတ်ငယ်လေးတွေ ပါရှိပါတယ်။ ယင်း လေအိတ်ငယ် လေးများကို ဆေးပညာ အခေါ်အရ sinus ဟုခေါ်ပါတယ်။
လေအိတ်ငယ်လေးများ တည်ဆောက်ပုံနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်
sinus လေးများကို cilia လို့ခေါ်တဲ့ အမွှေးနုလေးများ ပါတဲ့ အမြှေးပါးလေးနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပါ တယ်။ ယင်းအမြှေးပါးလေးမှာ mucus ဆိုတဲ့ အချွဲတမျိုးကို ထုတ်ပေးတဲ့ အလွှာလေးလဲ ပါရှိပါတယ်။ လေအိတ်ခေါ် sinus လေးများဟာ အသက်ရှုသွင်း ရှုထုတ်လုပ်နေသော နှာခေါင်း လမ်းတလျောက်နဲ့ အတွင်းဘက်မှာ ဆက်စပ်လျက် ရှိနေပါတယ်။
sinus ခေါ် လေအိတ်ငယ်လေးများရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်ကတော့ အသက်ရှုလိုက်တဲ့ လေထုထဲက ပါလာသော ဖုန်မှုန့်နဲ့
ပိုးမွှားများကို အချွဲလွှာလေး အတွင်း ဖမ်းယူလိုက်ပြီး အမွှေးနုလေး များရဲ့ တွန်းပို့လှုပ်ရှားမှု နှင့် sinus ရဲ့ သေးငယ်တဲ့ အပေါက်လေးကနေ ထုတ်ပြီး နှာခေါင်း မှတဆင့် အပြင်သို့ ပြန်လည်စွန့်ထုတ် စေပါတယ်။
များသောအားဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး တခုခုကြောင့် အအေးမိ ဖျားနာတဲ့ အခါမှာ စဖြစ်တတ်ပါ တယ်။ အအေးမိတဲ့အခါ
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ လေအိတ်ငယ်များရဲ့ အမြှေးပါးကို ယောင်ယမ်းစေ ပါတယ်။ တဖန် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သဘာဝ ကိုယ်ခံအား
များက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို တိုက်ထုတ်ရန် အမြှေးပါးများမှ အချွဲများကို ပိုမိုထုတ်စေပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ယောင်
ယမ်းနေတဲ့ လေအိတ်လေးဟာ အချွဲများနှင့် ပိုမိုပြည့်လာပြီး ပိုယောင်ယမ်းလာကာ ဘက်တီးရီးယား ပိုးမျာပါ ၀င်
ရောက်လာပါက ထိပ်ကပ်(ခပ်)နာခေါ် sinusitis ကို စတင်ခံစား ရပါတော့တယ်။
ယောင်ယမ်းနေတဲ့ လေအိတ်လေးတွေ တည်ရှိတဲ့နေရာကို မူတည်ပြီး အနည်းငယ်စီ ကွဲပြားပါတယ်။ များသော
အားဖြင့် ဖျားခြင်း၊ နုံးချိပြီး အားမရှိဖြစ်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း ၊ နှာရည် အဆက်မပြတ် ကျခြင်း၊ နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းတို့
(၁) အအေးမိဖျားနာနေတဲ့ ရက်အတွင်း မနက်နိုးလာတာနဲ့ မျက်ခုံးရိုးတ၀ိုက် ကိုက်ခဲခြင်း၊ ကိုယ်ကို အရှေ့နဲနဲ ကိုင်းတဲ့
အခါ ဦးခေါင်း အရှေ့ဘက်မှ ကိုက်ခဲမှုတခုခုကို ခံစားရခြင်း။
(၂) ပါးနှင့်မေးရိုး တ၀ိုက်မှ လေအိတ်လေးများ ယောင်ယမ်းမှုကြောင့် အပေါ်မေးရိုး တလျောက် နာကျင်ခြင်း၊
(၃) မျက်ဝန်းနှခုကြား လေအိတ်လေးများ ယောင်ယမ်းပြီး မျက်ဝန်းတ၀ိုက် ကိုက်ခဲခြင်း၊ မျက်ခွံ လေးများပါ
ယောင်ယမ်းခြင်း အစရှိသည် တို့ကိုပါ ခံစားရတတ်ပါတယ်။
လေအိတ်လေးများဟာ ဦးခေါင်းခွံရိုး အတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ အတွက် ဦးနှောက်နဲ့ တည်ရှိမှု အရမ်း နီးကပ်ပါတယ်။
ခဏတာ ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာဆိုပြီး ပေ့ါလို့မရပါဘူး။ ပဋိဇီဝ ပိုးသတ် ဆေးတချို့ကို သင့်ရဲ့ ဆရာဝန်မှ ညွှန်ကြားပါလိမ့်
မယ်။ ပိုးသတ်ဆေးများကို ညွှန်ကြားတဲ့ အချိန်ကာလ အပြည့်သောက် ပေးရပါမယ်။ ၂ရက်လောက် သောက်ပြီး
သက်သာလို့ ဖြတ်လိုက်ရင် ပိုးကခဏဘဲ ငြိမ်သွားပြီး နောက်တကြိမ်မှာ ဆေးကို ယဉ်သွားတတ် ပါတယ်။
အေးတဲ့ ရာသီဥတုမှာ နေတဲ့သူတွေ လေထုထဲက ပါတဲ့ ပန်းဝတ်မှုန်တချို့နဲ့ မတည့်ဘဲ Allergy ဖြစ်ကာ နှာရည်ခဏ
ခဏယို တတ်တဲ့သူတွေ၊ ပန်းနာရင်ကျပ် ရှိတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်ခံအား ကျဆင်းနေတဲ့ သူတွေ၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့် ညစ်ညမ်း
တဲ့ လေထုကို ရှုရှိုက်ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်ရသူတွေဟာ ဒီဝေဒနာကို ခဏခဏပြန်ခံစားရ တတ်ပါတယ်။
ဆေးဝါးအကူအညီ အပြင် ဒါလေးတွေပါ လုပ်ကြည့်မယ်။
ဆေးဝါးမှီဝဲပြီး တဘက်က ပိုးသေအောင် လုပ်တဲ့အပြင် ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တဲ့ အချက်လေးတွေ နဲ့ပါ သက်သာအောင် လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
(၁) ပြည့်ပြည့်၀၀ အနားယူပါ။ ကိုယ်ခံအား ကောင်းပြီး ခဏခဏ အအေးမမိစေရန် ထိန်းသိမ်း ပါ။ အာဟာရပြည့်ဝစွာ
(၂) ပက်လက်လှဲ အိပ်နေခြင်းက နှာခေါင်းကို ပိုပိတ်စေပါတယ်။ ကိုယ်အသက်ရှုလို့ ကောင်းတဲ့ ဘက်ကို တဘက်
စောင်းပြီး အိပ်ပေးပါက သက်သာစေပါတယ်။
(၃) ပူနွေးသော အရည်များကို မကြာမကြာ သောက်ပေးပါက နှာရည်ယို နှာပိတ်တာကို သက်သာ လျော့နည်းစေပါ
(၄) အ၀တ်စလေးကို ရေနွေးငွေ့ငွေ့လေးထဲ စိမ်ပြီး ယင်းအ၀တ်နွေးနွေးလေးကို မျက်နှာနှင့် နှာခေါင်းရိုး ပေါ်ကပ်ပေးပြီး အပူနွေးနွေးလေး ပေးတာကလဲ သက်သာစေပါတယ်။
(၅) ရာသီဥတု သိပ်အေးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ အိမ်တွင်း အပူချိန်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့ Equipment တခုခုကို တပ်ဆင်ထားပါ။
(၆) လေယာဉ် စီးတဲ့အခါမှာ ဖိအားမတူမှုကြောင့်လည်း လေအိတ်လေးတွေ ပိတ်ပြီး ပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လေယာဉ်နဲ့ ခရီးသွားစရာ ရှိလျင် သင့်ရဲ့ဆရာဝန် နဲ့တိုင်ပင်ပြီး အယောင် သက်သာ စေသော နှာခေါင်းအတွင်း အစက်ချပြီး သုံးရ
တဲ့ decongestant nasal drop တခုခုကို ကြိုသုံးသွားပေးပါ။
(၁) မျက်ခုံးရိုး တ၀ိုက် ယောင်ယမ်းကိုက်ခဲနေချိန်မှာ အာရုဏ်စူးစိုက်ပြီး တီဗွီကြည့်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာ screen ကိုကြည့်ခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း စတာတွေ မလုပ်မိပါစေနဲ့။
(၂) ကိုယ်နဲ့ မတည့်တဲ့ အရာများ (Allergen) ၊ ဖုန်ထူတဲ့ နေရာတွေကို သတိထားရှောင်ပါ။ တခုခုကို Allergic ဖြစ်ပြီး နှာရည်ယိုခြင်းကနေ ထိပ်ကပ်(ခပ်)နာ ပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
(၃) အရက်သောက်သုံး ခြင်းနှင့် စီးကရက်ငွေ့များက လေအိတ်လေးရဲ့ အမြှေးပါးကို ပြန်ယောင်ယမ်း စေတတ်ပါတယ်။ တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ပါ။
(၄) ရေကူးကန်မှာ သုံးတဲ့ ကလိုရင်း ( chlorine)ဆေး ဓါတ်ကလည်း ထိပ်ကပ်(ခပ်)နာ ဖြစ်သူ အများစုနဲ့ မတည့်တတ်ပါ
(၅) ရေအောက်ငုပ်ခြင်း (Diving) လုပ်သူတွေမှာ ရေငုပ်တဲ့အချိန် ရေများဟာ အရှိန်ဖိအား နဲ့ နှာခေါင်းမှ တဆင့်
၀င်ရောက်ပြီး လေအိတ် အမြှေးပါးလေး များကို ယောင်ယမ်းစေ တတ်ပါတယ်။
မိုး သင်ကြားခဲ့ရသမျှလေးကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်။ အားလုံးဘဲ ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော ဘ၀လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်။
Posted by Thant Zin Minn at 10:21 PM
ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်ရင်...78 ချက်ထဲက ဘယ်နှစ်ချက် လုပ်နိုင်သလဲ
၁။ email / facebook password ကို သူ မပေးရင် မတောင်းပါနဲ့...
၂။ သူ့ကို ယုံကြည်ပါ....
၃။ သူ့ကို အကျပ်မရိုက်ပါစေနဲ့...
၄။ သူ့ကို စဉ်းစားခွင့်ပေးပါ....
၅။ သူ့ကို နားလည်ပေးပါ...
၆။ သူ့ကို စာနာပေးပါ....
၇။ သူ့ကို ဦးဆောင်ခွင့်ပေးပါ...
၈။ သူ့ဆီက အကြံဥာဏ်ရယူပါ...
၉။ သူ့ရဲ့မိသားစု ကို နားလည်ပေးပါ
၁၀။ သူ့ကို ဘုကန့်လန့်မပြောပါနဲ့....
၁၁။ သူ့ကို အထင်သေးတဲ့ စကား မဆိုပါနဲ့....
၁၂။ အကြောင်းရင်း မရှိ အလကားနေရင်း စိတ်မကောက်ပါနဲ့...
၁၃။ သူ ဖုန်းဆက်ရင် ချက်ချင်းကိုင်ပါ...
၁၄။ သူ မက်ဆေ့ခ်ျပို့ရင် စက္ကန့် ၂၀ ထက် ပိုမကြာပဲ အကြောင်းပြန်ပါ....
၁၅။ online သုံးတဲ့အခါ ...သူရှိမရှိ အရင်ကြည့်ပါ....
၁၆။ သူ့ရဲ့ စေတနာစကားကို ပေါ့ပျက်ပျက် မလုပ်ပါနဲ့....
၁၇။ အမြဲတမ်း ကလေး မဆန်ပါနဲ့ ...
၁၈။ နေရာတကာ သူ့ထက်သိတဲ့ ပုံစံမျိုးမလုပ်ပါနဲ့....
၁၉။ မနက်တိုင်း နှုတ်ဆက်စကား ဆိုပါ ...အနည်းဆုံး မက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါ....
၂၀။ သူနဲ့ တွေ့တိုင်း အနမ်းပေးပါ....
၂၁။ သူ့မွေးနေ့ကို မှတ်ထားပါ....
၂၂။ သူ့ရဲ့ လစာကို မမေးပါနဲ့....
၂၃။ သူ့ရဲ့ အိပ်မက်ကို ပျက်ရယ် မပြုပါနဲ့...
၂၄။ သူနမ်းတဲ့အခါ မျက်စိ မှိတ်ထားပေးပါ....ဆံနွယ်တွေကို နမ်းခွင့်ပေးပါ
၂၅။ သူကြိုက်တတ်တဲ့ အရာတွေ ကို မှတ်ထားပါ...
၂၆။ သူ မကြိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုလဲ စာရင်းပြုစုထားပါ...
၂၇။ သူ မကြိုက်တဲ့ အကျင့်တွေကို ပြင်ပါ....
၂၈။ သူ့မိဘတွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင် နေပေးပါ...
၂၉။ သူ ၀ါသနာပါရာ အလုပ် ကို နားလည်ပေးပါ....အပြစ်မမြင်ပါနဲ့......သင့်ကို ဥပေက္ခာပြုထားတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့...
၃၀။ သူ့ရဲ့ အကျင့်ကို သိထားပေးပါ... တကယ်လို့ ပြင်စေချင်တယ်ဆိုရင် နားဝင်အောင် စေတနာထားပြီး ပြောပါ...အော်ဟစ်ပြောဆိုခြင်း မလုပ်ပါနဲ့...
၃၁။ သူပြောတဲ့စကားတွေကို မှတ်ထားပေးပါ...
၃၂။ ချိန်းထားတဲ့ နေရာမှာ သူ့ကို နာရီဝက်ထက် ပိုမစောင့်ခိုင်းမိပါစေနဲ့...
၃၃။ ဘေးကျပ်နံကျပ်မေးခွန်းမျိုး မမေးပါနဲ့....
၃၄။ သူနဲ့ သွားတဲ့ အခါ သူ့ရဲ့ လက်ကို ချိတ်ထားပေးပါ...သူ ခါးဖက်တာ ခံနိုင်ရည်ရှိပါစေ....
၃၅။ သူ online မှာ ရှိတဲ့ အခါ ဘယ်ကောင်မလေးနဲ့ ကျူနေတာလဲ စသဖြင့် စကားတွေနဲ့ စတင် မထိုးနှက်ပါနဲ့....
၃၆။ သူ့ရဲ့ ဆွေမျိုးတွေကို နားလည်ပေးပါ...တည့်အောင်နေပါ...
၃၇။ သူ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့ အတင်းအဖျင်းကို သူ့ကို မပြောပါနဲ့....
၃၈။ ထမင်းမစားခင် သူ့ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ထမင်းစားပြီးပြီလားလို့ မေးပါ...
၄၀။ သူ အလုပ်အဆင်မပြေတဲ့အခါ...သင့်ရဲ့ ဆန္ဒကို မျိုသိပ်ထားပေးပါ....
၄၁။ သူ စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါ... အားပေးစကားဆိုပါ...
၄၂။ သင် သူ့ကို ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း...အမူအရာများနဲ့ ပြသပါ....
၄၃။ အရင်တုန်းက ရည်းစားဟောင်းနဲ့ သူ့ကို မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့...
၄၄။ သူ့ရည်းစားဟောင်းအကြောင်းကို အကုန်လိုက်မမေးပါနဲ့....
၄၅။ အကြောင်းတစ်ခုခု ရှိရင် သူနဲ့ တိုင်ပင်ပါ...
၄၆။ ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါ .... သူနဲ့ စကားပြောပါ...၀ယ်မဲ့အရာကိုပဲ အာရုံမစိုက်ပါနဲ့...
၄၇။ သူ့မွေးနေ့မှာ မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးပါ...
၄၈။ သူ့မွေးနေ့မှာ အစောဆုံး မွေးနေ့ ဆုတောင်းပို့ပေးပါ...
၄၉။ အိမ်ပြန် ခွဲခွာခါနီးတိုင်း သူ့ကို အနမ်းပေးပါ....
၅၀။ သူကြိုက်တတ်တဲ့ အစားအစာတွေကို ချက်ပြုတ်တတ်အောင် သင်ယူထားပါ....
၅၁။ သူ သင့်လက်ရာကို မြည်းစမ်းခွင့်ရပါစေ...ချက်ပြုတ်ကျွေးပါ...
၅၂။ သူမကြိုက်တဲ့ တခြားယောက်ျားလေးအကြောင်း သူ့ရှေ့မှာ မပြောပါနဲ့....
၅၄။ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခွင့်တောင်းပါ...
၅၅။ သင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သူ့ကို မိတ်ဆက်ပေးပါ....
၅၆။ သင့်မိဘတွေနဲ့ သူ့ကို မိတ်ဆက်ပေးပါ...
၅၇။ အမြဲ နားပူနားဆာ မလုပ်ပါနဲ့...အခြေအနေကို အကဲခတ်ပါ...နေသာမှ ကြေညာပါ...
၅၈။ သူမသိသေးတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခု ပြောတဲ့အခါ ဒါလေးတောင်မသိဘူးလား လို့မပြောပါနဲ့...အဲလိုတော့ ကြားမိတယ် ကြားဖူးတယ် စသဖြင့် ပြောဆိုပါ...
၅၉။ သူနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ...စကားနာမထိုးပါနဲ့...
၆၀။ စကားတစ်ခွန်းကို ထပ်ခါတလဲလဲ နားငြီးအောင် မပြောပါနဲ့.......
၆၁။ အိမ်ပြန်နောက်ကျတဲ့အခါ...သူ့ကိုလာကြိုပေးဖို့ တောင်းဆိုပါ...
၆၂။ သူ့ကို စိတ်ကောက်ရင် ၄ ရက်ထက်ပိုမကြာပါစေနဲ့...နားလည်အောင် ညှိနှိုင်းပါ...
၆၃။ လူမှုရေး ဘာသာရေး ၀ါသနာပါတဲ့သူဖြစ်ရင် သူ့အလုပ်ကို ပံ့ပိုးပေးပါ...
၆၄။ သူ့ရှေ့မှာ တခြားကောင်လေးတွေကို စိုက်ကြည့်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့....
၆၅။ သူတောင်းပန်တဲ့အခါ...သူ့ကို ရှင်းပြခွင့်ပေးပါ.....ကိုယ်ပြောချင်ရာကို တစ်ဘက်သတ်မပြောပါနဲ့...
၆၆။ သူ့ဖုန်းကို ချပစ်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့...
၆၇။ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ သောက်စားတဲ့အခါ ...နားလည်ပေးပါ....
၆၈။ သူ့အလုပ်က မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ရတဲ့ အလုပ်မျိုးဆိုရင် သ၀န်တို မနာလို မဖြစ်ပါနဲ့...သင့်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ ယောက်ျားကောင်းဟာ မဖောက်ပြန်ပါဘူး...
၆၉။ သူ့မိတ်ဆွေ မိန်းကလေးတွေနဲ့ စကားပြောရင် နားလည်ပေးပါ...
၇၀။ သူ့ရှေ့မှာ ရဲတင်းတဲ့ အပြုအမူမလုပ်ပါနဲ့... ရှက်တဲ့ ပုံစံ မျိုး ပြုမူပါ...
၇၁။ သင့်ရဲ့ ဆံနွယ်တွေကို သန့်ရှင်းအောင် အမြဲထားပါ....ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင် သန့်ရှင်းစွာ နေထိုင်ပါ
၇၃။ အိမ်မှုကိစ္စ နိုင်နင်းအောင် သင်ယူထားပါ...
၇၄။ ကလေး ချစ်တတ်ပါစေ....
၇၅။ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဘေးစကားကို မယုံပါနဲ့... သေချာလေ့လာပြီးမှ သူနဲ့ ဆွေးနွေး ဖွင့်ပြောပါ....
၇၆။ သူကြိုက်တတ်တဲ့ သီချင်းတွေကို မှတ်သားထားပါ....
၇၇။ သူ စိတ်ဆိုးတဲ့အခါ...သူနဲ့ သေချာ ဆွေးနွေးပါ...သင့်ရဲ့အမှားကို ၀န်ခံပါ... တောင်းပန်စကားဆိုပါ....
၇၈။ သူုကို စိတ်ဆိုးလို့ လမ်းခွဲစကား ကို လွယ်လွယ် မဆိုပါနဲ့ ..
Posted by Thant Zin Minn at 10:15 PM
ကုမ္ပဏီ မအောင်မြင်နိုင်ဖွယ် အလားအလာကို ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်သည့် နည်းလမ်းများ
စီးပွားရေး လောကမှာ ရှိကြတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းတွေ အစဉ်တစိုက် ကြီးပွား တိုးတက်နေအောင် နေ့မအား၊ ညမနား ကိုယ်စွမ်း၊ ဥာဏ်စွမ်းရှိသ၍ အပတ်တကုတ် ကြိုးစားအားထုတ် လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိမိတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ လုပ်ငန်း မအောင်မမြင် ဖြစ်နိုင်တဲ့ အနေအထားတွေကို ကြိုကြို တင်တင် သတိမမူ မိတာကြောင့် အချို့ ကုမ္ပဏီတွေမှာဟာ ငွေကြေး ကသီလင်တဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်း မအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင် တွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် မိမိတို့ကုမ္ပဏီမှာ လုပ်ငန်း မအောင်မမြင် ဖြစ်နိုင်ဖွယ် အလားအလာတွေ ရှိမရှိကို ကြိုတင်မှန်းဆကြည့်ပြီး သတိမူ-ပြုပြင် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းကို ပြန်လည်မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်။
Altman ၏ ကြိုတင်ဟောကိန်း အချိုး(၇)မျိုး
ဒီကြိုတင်မှန်းဆနည်းကို အမေရိကန်နိုင်ငံသား ပရော်ဖက်ဆာ Altmanက ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဖော် တင်ပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးအချိုး (၇)မျိုးပါဝင်တဲ့ ဟောကိန်ုး ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေး ကသီလင်တ ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်း မအောင်မမြင် ဖြစ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို မီးမောင်းထိုး ဖော်ပြတဲ့နေရာမှာ ဒီကြိုတင် ဟောကိန်းထုတ်နည်း ပုံစံက အခြေခံအားဖြင့်အသုံးဝင်ပါတယ်။ ပေ၇ာ်ဖက်ဆာ Altman က ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း ပုံသေဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း ပုံသေရှိမနေဘဲ အစဉ် ပြောင်းလဲနေတဲ့ အနေအထား (Variables)(၇)မျိုး ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဲဒီအနေအထားတွေကို
ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါသက်ဆိုင်ရာ စာရင်းအချိုးတွေနဲ့ ဆန်းစစ်ကြည့်ရှု ကြိုတင် ဟောကိန်း ထုတ်နိုင်တယ်လို့လဲ ဆိုပါတယ်။
၁။ အရွယ်အစား (Size) ကုမ္ပဏီရဲ့ ရပိုင်ခွင့် စုစုပေါင်း (Total assets)နဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။
၂။ ငွေဖြစ်လွယ်မှု (Liquidity) လက်ငန်းအချိုး (Current Ratio)နဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။
၃။ ရပိုင်ခွင့်များအပေါ်ပြန်ရနှုန်း (Return on Assets) အတိုးမပေးမီနဲ့ အခွန်မဆောင်မီဝင်ငွေ (Earnings Before Interest and Taxes) ကို ရပိုင်ခွင့် စုစုပေါင်း (Total Assets)နဲ့ စားတဲ့ နည်းနဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။
၄။ ၀င်ငွေတည်ငြိမ်မှု (Stability of Earnings) ၁၀နှစ်ဝန်းကျင် အလားအလာကို ခန့်မှန်းခြေစံ အမှား (Standard Error of Estimate)နဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။
၅။ ကြွေးမြီဝန်ဆောင်မှု (Debts Service) အတိုးပမာဏအချိုး (Interest Coverage Ratio) နဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။
၆။ စုစုပေါင်းမြတ်စွန်းမှု (Cumulative Profitability) ချန်ထားအမြတ် (Retained Earning )ကို ရပိုင်ခွင့် စုစုပေါင်းနဲ့ စားတဲ့နည်းနဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။
၇။ အရင်းအနှီးထည့်ဝင်မှု (Capitalization)အများပိုင်ဆိုင်ခွင့် (Common Equity) ကို အသုံးပြုမတည်ငွေရင်း စုစုပေါင်း (Total Capital Employed)နဲ့ စားတဲ့နည်းနဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။
မအောင်မြင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ အောင်မြင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ အကြားမှာရှိတဲ့ ကွဲပြားခြားနားချက်တွေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ကြည့်တဲ့အခါမှ ဒီအပြောင်းအလဲ (၇)မျိုးကို အကောင်းဆုံး ပေါင်းစပ်ကြည့်လို့ ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အချိုးတွေအားလုံးကို အတူအကွ ပေါင်းစပ် အသုံးချမယ်ဆိုရင် ငွေကြေး ကသီလင်တဖြစ်ရုံသာမက ကုမ္ပဏီပါ ပျက်စီး ဆုံးရှုံး သွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေထိ ဆိုက်ရောက်သွားနိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီမျိုးတွေကိုပါ ထိထိရောက်ရောက် ကြိုတင် ဟောကိန်းထုတ်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပရော်ဖက်ဆာက ဆိုပါတယ်။
မအောင်မြင်မှုနဲ့ ပက်သက်လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေ ဘယ်လိုပဲ ရှိစေကာမူ၊ ကုမ္ပဏီ မအောင်မြင်မှု ဆိုတာဟာ ကုမ္ပဏီကို ဖျက်သ်ိမ်းရတဲ့အထိ အကျိုး ဆိုက်ရောက်သွားတယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အကြွေးတွေ မပေးဆပ်နိုင်တာကို မအောင်မြင်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်း ပြောရရင် ကုမ္ပဏီဟာ လောလောလတ်လတ် ပေးရန်ရှိတာတွေကို အချိန်စေ့ရောက်တဲ့ အခါမှာ မပေးဆပ်နိုင်ရင် မအောင်မြင်တဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မအောင်မြင်တာမျိုးဟာ (Technical Insolvency)ဖြစ်ပါတယ်။ မအောင်မြင်မှု နောက်တစ်မျိုး ကတော့ လူမွဲစာရင်း အသွင်းခံရတာ (Bankruptcy) ဖြစ်ပါတယ်။ ပေးရန်တာဝန် စုစုပေါင်းဟာ
ရပိုင်ခွင့် များရဲ့ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက် (Fair Valuation) ထက်ပိုနေမယ်ဆိုရင် ကုမ္ပဏီဟာ လူမွဲဖြစ်သွားပါတယ်။ တစ်ခြားနည်းနဲ့ပြောရရင် ကုမ္ပဏီမှာ အသားတင်တန်ဖိုး (Net Worth) လုံးဝမရှိ (Negative)တော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Thant Zin Minn at 9:07 PM